Best Day Njem Iji Were Site Berlin | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Day Njem Iji Were Site Berlin
Best Day Njem Iji Were Site Berlin
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 06/11/2020)
Njem njem kachasị elu iji were site na Berlin bụ ihe dị mkpa n'agbanyeghị na Berlin n'onwe ya bụ ebe dị egwu ileta! E nwere ezu oké mmasị na Germany isi obodo na-ị na-arụ ụbọchị. Otú ọ dị, ụbọchị njem site Berlin ha gbara agbata obi obodo na obodo nwere ike na-enye ihe ndị magburu onwe respite si ìgwè mmadụ. site ọmarịcha obí eze na pristine ogige nke Potsdam eke ịma mma nke Rivers Havel na spree, Gburugburu Berlin na-enye ọtụtụ nke na-adọrọ na ihe na-eme. The obodo okporo ígwè na ọha iga netwọk-eme ka ọ dị mfe inweta esi na banyere, na njegharị a haziri ahazi na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịga n'ihu ma ọ bụrụ na achọrọ.
Day Njem Site Berlin: Potsdam
Ọ dịghị ụzọ mgbapụ si Berlin na-akawanye ọzọ ntị karịa Potsdam. Ya mere, anyị nwere ike na-enweghị a ndepụta ụbọchị njem site Berlin na-enweghị ya. Ihe kpatara ya dị mfe. n'ime 40 Nkeji ị ga - azụ ahịa na obodo ukwu maka otu ụbọchị ịgagharị na ubi na obí eze nke obodo Prussia mbụ a.
Amalite ụbọchị gị njem Potsdam awagharị kwupụta Old Dutch Nkeji iri na ise. The red bricked Dutch style ije nke Potsdam Dutch Nkeji iri na ise bụ ihe pụrụ iche, bụghị naanị na Germany ma na niile nke Europe. Ọbụna na Netherlands, achọ outbuildings nke dakọtara Jan Bouman narị afọ nke 18 kere eke na Potsdam gaghị ekwe omume.
Dresden na Potsdam Ụgbọ oloko
Magdeburg na Potsdam Ụgbọ oloko
Hanover na Potsdam Ụgbọ oloko
Day Njem Site Berlin: Muskau
Ọtụtụ ndị na-abịa na-eji oge nghọta si na UNESCO World Heritage saịtị, Muskauer Park na ya pụtara English gardens na Neo-Renaissance nnukwu ụlọ gburugburu a obere ọdọ. Ihe pụrụ iche banyere nke a ogige bụ na ya ọdịdị ala-emekọ ma Germany na Poland! Ya mere a ije site na ogige na-agụnye a nleta mba abụọ na otu shot. Anyị na-amasị arụmọrụ! E nwere bụghị ọtụtụ na-eme wezụga nke a, otú a nleta Bad Muskau na-kacha mma paired na ndị ọzọ dị nso na-adọrọ mmasị dị ka ndị mmụọ ọjọọ Bridge.
Berlin na Bad Maskau Ụgbọ oloko
Dresden na Bad Maskau Ụgbọ oloko
Potsdam na Bad Maskau Ụgbọ oloko
Magdeburg na Bad Maskau Ụgbọ oloko
Day Njem Site Berlin: Bremen
Ọ dị mma, Ọ dị mma! M maara na nke a bụ a bit nke a gbatia ka a ụbọchị njem. Ma, ozugbo ị na-e, ị ga-aghọta ihe mere na enweghị m ike na-ahapụ ya anya anyị ụbọchị njem site Berlin ndepụta! Ihe na-eme na Bremen agụnyekwa inwe nri abalị na a biya ubi na a ụgbọ mmiri, nghọta si na ọmarịcha Schnoorviertel, na-aga ije dị mkpirikpi nke 100 mita ogologo Bottcherstrasse, na-atụrụ ndụ na kọfị na achicha na isi nke a milikuku. Ị nwere Na Na-ahụ ya maka onwe gị!
Berlin na Bremen Ụgbọ oloko
Hamburg na Bremen Ụgbọ oloko
Hanover na Bremen Ụgbọ oloko
Potsdam ka Bremen Ụgbọ oloko
Final Choice: Dresden
Dresden na-eme ka ihe dị egwu ụbọchị njem site Berlin! The obodo bụ mkpokọta awa abụọ ụgbọ okporo ígwè si German isi obodo. Ọ na-emi odude gara ọkara n'etiti Berlin na Prague, na ọ bụ nnọọ obere na mfe ịnyagharịa, nke pụtara na ọbụna na dị nnọọ otu ụbọchị ị ga-enwe ike ịhụ nnọọ a bit.
The Elbe osimiri abahade obodo; na otu akụkụ e nwere Altstadt (ma ọ bụ Old City), na ndị ọzọ, e nwere Neustadt (New City), ma maa ihe, na Altstadt bụ n'ezie ọhụrụ!
Dresden e tụrụ bọmbụ n'ala na njedebe nke WW2 (jide n'aka na ị na-agụ Slaughterhouse Five tupu ị gara, ma ọ bụrụ na ị na-n'ime akụkọ ihe mere eme) na Altstadt ebe e wughachiri kpọmkwem dị ka ọ bụ n'ihu agha, ma ụfọdụ nke ụlọ naanị agwụ agwụ mgbe 2000.
Njikere tiekwa mkpu nke Berlin maka ụfọdụ oké ụbọchị njem? Enwetaghị a na-agba ịnyịnya e na-enyemaka nke Save A Train. The zoro ezo ụgwọ, nweghị nsogbu oge, dị nnọọ fun!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Top gosiri Day Njem Iji Were Site Berlin” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-from-berlin%2F ‎– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
5 Atụmatụ N'ihi ejegharị Site Train Na Europe